K: နန္ဒာသိန်းဇံ.....နောင်တ ကင်းရာ သို့
နောင်တ ကင်းရာ သို့ သွား ခဲ့ ပြီ ဖြစ်သော ဆရာ ဦးသိန်းဇံ အမှတ်တရ..
ကျွန်တော် သူ့ ကို ထိုနေ့ က ချက်ချင်း စကားမတုံ့ ပြန်နိုင်ခဲ့ ပါ။ ‘ ၀ဲ ’ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလှည့်အပတ်၊ အညာ အလှိုင်း၊ အဖြီးအဖြန်း တွေနဲ့ မိန်းမကို ဆက်ဆံတတ်တဲ့ ‘ ယောက်ျား ’ ကို အလင်္ကာပြုရင်ကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ တွေးနေမိ တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Sharing In
ွှအထက်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀၊ ပြီးတော့ လူငယ်ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ဆရာ့ ဒသန တွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပဲ့ပြင်ခဲ့ရတယ်၊ ရင့်ကျက်ခဲ့ရတယ်၊ လူတောထဲ ၀င်ဆန့်ခဲ့တယ် လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင် ဆရာ့ကျေးဇူးတွေ တောင်ထက် မြင့်ပါပေတယ်..
ကိုယ်ပိုင်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ ဆရာ့ ရဲ့ ထွက်သမျှ စာအုပ်တွေလဲပါတယ်.။ အသက် ၆၄ ဆိုတာ ဆရာ့လို လူမျိုးအတွက် အသေစောလိုက်တာ လို့ ပဲ ပြောပါရစေတော့
အဲဒီဝဲကတော့ထဲက လောကမာယာ အာရုံအစုံအလင်ထဲကကို ရုန်းမထွက်နိုင်ကြတာပါ ။
သူငယ်ချင်းပြောဖူးတဲ့ ရဲတိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့လူက ပြန်ထွက်လာချင်ပြီး ရဲတိုက်ထဲ မရောက်ဖူးတဲ့လူက အထဲဝင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးပါ ဆက်တွေးမိသွားတယ် ။
ကျွန်တော့် ဘဝရဲ့  အစိပ်အပိုင်းတစ်ခု
ဖြစ်ခဲ့ ဘူးတယ်လေ..၊ ဆရာ့စာတွေက၊
ဗုဒ္ဓစာပေ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို ဖတ်လို့ 
ကောင်းအောင် သူရေးခဲ့ ပါတယ်။.
အကြိုက်ဆုံးကတော့ “ ဘဝအဓိပ္ပာယ်နှင့်
သူ့စာတွေ အများကြီးကျန်ခဲ့ လို့ 
အကြိုက်ဆုံးကတော့ “ ဘဝအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဘဝသစ္စာ” ပါပဲ။
I totally agree and read it uncountable times that given meatorch of my life and influenced ideology.
A most remarkable dedication in Saya's book is " To adorable father and mother who always remind me try to escape from the life's cycle (Sansara).